Boqor Salmaan oo Erdogan kala hadlay arrinta weriye Khashoggi iyo xaaldii u danbaysay ee beesha caa;amku ka istaagtay | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Boqor Salmaan oo Erdogan kala hadlay arrinta weriye Khashoggi iyo xaaldii u...
Boqor Salmaan oo Erdogan kala hadlay arrinta weriye Khashoggi iyo xaaldii u danbaysay ee beesha caa;amku ka istaagtay
“Iyaga oo sheegay iney soo dhaweeynayaan baaritaanka ay si wada jir ah u wadaan Sacuudiga iyo Turkiga, baaritaannada kaddibna ay ka soo bixi doonaan iney Sacuudiga si buuxda u qaadato mas’uuliyadda wariyaha la la’yahay.”
Madaxweyne Trump ayaa mar sii horreysay sheegay in Mareykanku uu “ciqaab adag” marsiin doono Sacuudi Carabiya waa haddii buu yiri la xaqiijiyo in Boqortooyada Sacuudi Carabiya ay mas’uul ka aheyd dhimashada weriye Jamaal Khashoggi.
Waxa uu sheegay inuu “aad uga xumaan doono ugana caroon doono haddii ay arrintaasi dhab noqoto”, hasayeeshee waxa uu uu meesha ka saaray inuu hakin doono qandaraaska milateri ee ballaaran ee uu Mareykanku kula jiro boqortooyada taas oo uu ku sababeeyay in haddii la joojiyo qandaraaskaasi ay dad badan ku dhici doonto shaqo la’aan.
Wakaaladda wararka ee Sacuudiga oo soo xigatay xubno sare oo boqrtooyada ka tirsan ayaa waxay qortay “iney boqortooyada ay iska caabbin doonto waxyeello ama tallaabbo kasta oo dhan walba uga timaadda oo la xidhiidha eedda dusha laga saaray ee wariyaha la la’yahay oo ku dambeeyey qunsuliyaddeeda Istanbul”
“Waxayna Boqortooyadu sheegtay iney jawaab culus ka bixin doonto tillaabba kasta oo lagu soo qaado, maadaamaa dhaqaalaha Sacuudiga uu saameyn xoog leh uu ku leeyahay dhaqaalaha dunida.
Khashoggi, oo ka soo horjeeday dowladda Sucuudiga, ayaa la waayay labadii Oktoobar kaddib markii uu booqday qunsuliyadda dalkaasi uu ku leeyahay magaalada Istanbul.
Sacuudi Carabiya ayaa iska fogaysay eedaha ah inay amartay in la dilo ninkaasi kuna tilmaantay “been”.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Sucuudiga, Amiir Cabdulcasiis bin Sacuud bin Naaif bin Cabdulcasiis, ayaa war ay ka soo xigatay wakaallada wararka ee Sucuudiga Jimcihii, waxaa lagu sheegay inuu yiri, boqortooyadu waxa ay sidoo kale danaynaysaa inay qeexdo “xaqiiqada dhabta ah”, hasayeeshee waxa uu intaasi ku daray in eedaha ah inay amartay dilka Khashoggi ay yihiin kuwo aan “sal lahayn”..
Ila wareed ka tirsan ciidammada ammaanka ee Turkiga ayaa BBC-da u sheegay in saraakiishu ay hayaan caddeyn ah cod maqal iyo muuqaal ah oo qeexaysa in Khashoggi, oo wax ku qori jiray wargeyska the Washington Post, lagu dhex dilay qunsuliyadda dhexdeeda.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga, Mevut Cavusoglu, ayaa sheegay in Sacuudi Carabiya aanay weli la shaqeynayn dambi baarayaasha.
Waxa uu ka codsaday inay la shaqeeyaan baarayaasha una ogolaadaan saraakiisha Turkiga inay gudaha u galaan qunsuliyadda.
Previous articleDawladaCanada ayaa shaacisay qadarka lacag ay ugu deeqday somaliland iyo mashaariicda loogu tala galay.
Next articleBelgium-ka ayaa laga doortay qofkii ugu horeeyay oo madow ah oo kaasi oo noqda duq magaalo- waa aabaha dhalay laacibka kooxda Manchester City uga dheela daafaca ee Vincent Kompany.